Macalin Diirane oo Mar Kale Doxa u Dusay, Tolow Maxaa Kaga Dabran? – Rasaasa News
Apr 7, 2010 diirane, doxa, Jwxo-shiil, Macalin
War uu na soo gaadhsiiyey wariyaha rasaas.com uga soo warama Doxa dalka Qatar, ayaa sheegaya in maalinkii doraato ahayd uu Macalin Diirane, oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil uu gaadhay magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Wariyuhu waxaa uu sheegay in Macalin Diirane ay la socdaan koox caruur ah, oo laga keenay dalka Ingriiska, kuwaas oo qaba qamiisyo iyo cimaadmado. Caruurtan ayaa magaca ay ku socdaan uu yahay agoon aan aabo lahayn, lalana hoos galidoonaa Hay,ado Islamic ah si ay lacgo u bixiyaan.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda Jwxo-shiil, oo awal hore lacago badan ka heli jirtay Jaaliyadaha dibada, ayaa ka dib kolkii ay Jaaliyaduhu ogaadeen in aan halgan waxba loogu qaban ay joojiyeen. Waxaana kooxda soo foodsaartay taageero la,aan dadweyne iyo dhaaqle xumo ay sababeen sida guracan ee ay u majara habaabiyeen halgankii ummada Somalida Ogadeeniya.
Kooxda, ayaa sida ay wararku sheegayaan, haatan is tustay in gudoomiyaha Somali Galbeed uu guulo badan oo dhinaca siyaasada iyo dhaqaalaha ah ka sameeyey dalalka Carabta, isaga oo aan waligii qaadan shillin qaaraan ah. Waxaana la filayaa in socdaalka Macalin Diirane ee soo noqnoqday uu dabada ku hayo masayr ay kooxda Jwxo-shiil ka qaaday Somali Galbeed iyo xidhiidhka ay la leedahay dalalka Carabta.
Sida ay warar hoose sheegayaan, macalinka ayaa iskaga tagay kooxda Jwxo-shiil doonayana in uu Hay,ad khayriya ah ka samaysto dalalka Carabta si uu isaga maydho sumcad xumadii ka soo gaadhay halganka ay kooxdiisu hoga ku riday. Dhinaca kale waxaan la hubin in uu Jwxo-shiil, u sheegay Diirane madaama uu Macalin yahay in uu shaadhka badasho oo uu qaato cimaamad iyo shulug, carabahana uu u tago sadaqo agoomeed.
Si kastaba arintu ha ahaatee Macalin Diirane, ayaa kolka ay isaga iyo caruurta la sheegay in ay agoon yihiin, kolka ay dhamaystaan socadaalkooda Qatar in ay ka aadi doonaa boqortooyada Sacuudi Carabiya, si hay,ado reer Sacuudi ahna loogu bandhiga bal in ay caawin karaan Agoonta lagu xoogsanayo.
Ugu dambayntii waxaa uu wariyuhu lee yahay shaadhka la doono ha la qaatee dadweynaha Somalida Ogadeeniya si fiican ayey uga dharagsan yihiin xubnaha taariikhda madow ee burburiyey halgankii ay umadu ku tiir iyo tacab beeshay.
Arimaha kooxda Jwxo-shiilada